निर्वाहमुखी कृषि गर्नेलाई सहयोग र अनुदानमा भेद नगरौ । खेतीपाती खानका लागि हो त्यसपछि मात्र पैसाका लागि हो । - Ruru FM
अहिले विदेशमा भएका नेपाली युवालाई फिर्ता ल्याएर व्यावसायिक कृषि गर्न लगाउनुपर्छ भनिन्छ। तर, यो ढाँट कुरा हो। किनभने, यही खेती प्रणाली बाट घर व्यवहार नचलेर दुई–चार पैसा कमाउन उनीहरू विदेश गएका हुन्। ७० लाख नेपाली जो विदेशमा छन्, केही रहरले पुगे पनि अरु सबै बाध्यताले विदेश गएका हुन्। अर्थात्, कृषिबाट खान नपुगेर गएका हुन्। सबै कुरा यथावत् राखेर कृषिमा यिनलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ र यिनीहरु किन फर्कन्छन् ? अहिलेको खेती प्रणालीबाट कसरी फाइदा हुन्छ र ती मान्छे फेरि फर्किएर कृषिमा आबद्ध हुन्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोजौ।
कृषिलाई साँच्चिकै सुधार्ने हो भने शुरूमा हाम्रो कृषि प्रणालीलाई खुट्टाले टेक्ने बनाउनुपर्छ। जुन कारणले युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भए, त्यो कारण मसिनो गरी हेरौं। किसानलाई टिकाइराख्न के गर्ने ? अहिले एकातिर धेरै जमीन बाँझो छ, अर्कातिर भूमिहीन किसान छन्।
जमीनको व्यवस्था गर्ने हो भने सरल कुराबाट थालनी गर्नुपर्छ। खेती गर्ने गरी जो किसान फर्किएर आउँछन्, उनीहरुलाई कृषि गर्न तथा भविष्यमा समृद्धिको आधार उन्नत खेतीपातीलाई जमीन उपलब्ध गराउनुुपर्छ। त्यसका लागि सपना बाँड्नुपर्दैन। आवश्यक सहयोग, आँट, भरोसा र ज्ञान दिनुपर्छ। त्यो स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ।
कृषिलाई गुजारा चलाउने निर्वाहमुखी भयो भनिन्छ, यो आफैंमा नराम्रो होइन। आफूले खाने र बचेको अरुलाई बेच्ने हो।
व्यावसायिक कृषि नराम्रो कुरा होइन। तर, मानव समाज सहकार्य, सम्बन्ध र समझदारीमा चलेको हुन्छ। व्यावसायिक कृषिको नाममा निर्वाहमुखी कृषि गर्नेलाई सहयोग र अनुदानमा भेद नगरौ। खेतीपाती खानका लागि हो त्यसपछि मात्र पैसाका लागि हो ।
भविष्य भनेको नहिंडेको बाटो हो, जुन अनुभवका आधारमा सिकेर अघि बढ्दै जानुपर्छ। कृषिको भविष्यको बाटो तय गर्न किसानको अनुभव र त्यसबाट सिक्ने मानिसबाट मात्र सम्भव छ।
भूगोल र मौलिक ज्ञान अनुसारको खेतीमा जोड दिनुपर्छ। खाद्य सुरक्षा गर्ने, जनताको जीवन सुरक्षित पार्ने हो भने कृषि कर्म व्यापारिक होइन, खानका लागि हो भनी स्वीकार्नुपर्छ। कृषिमा सुधार गर्न पहिला बिचौलियालाई नियन्त्रित गर्न जरुरी छ।
बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न स्थानिय सरकारले किन नसकेको ? उसैलाई जिम्मा लगाउने बिचौलियाकै सहयोग लिने किन ? स्थानिय सरकारले किसानकोलागि नयाँ संयन्त्र बनाउन किन सक्दैन ?
आगामी बजेटबाट निरीह साना किसानलाई जोगाउने योजना अघि सारौ यहाँबाट शुरूगरे कृषिले खुट्टा टेक्न शुरू गर्छ।
निरीह साना किसानलाईअहिले जे गर्दैछौं, गलत गर्दैछौं बाटो सच्याइहालौं।
तालखोला क्षेत्र कुनै जमानामा थकालि समुदायको बाक्लो ब्यापारिक वस्ति थियो